Biraon’ny SMM : Tokony hametra-pialana ! -
AccueilRaharaham-pirenenaBiraon’ny SMM : Tokony hametra-pialana !
Fanelezana tsaho sy fanakorontanana saim-bahoaka… Ireo no nataon’ny biraon’ny SMM ary voaporofo izany amin’izao fiverenan’i Claudine an-tanindrazana izao taorian’ny fitsaboana natao azy tatsy amin’ny Nosy Maorisy. Tokony hametra-pialana avy hatrany araka izany ny biraon’ny SMM mba mbola manana ny antsoina hoe “honnêteté intellectuelle”. Tsy nampandositra an’ity mpandraharaha ity araka ireo fanambarana maro nataon’ny biraon’ny SMM ny fanjakana sy ny Dokotera, manamarina ny nambaran’ny polisy tao amin’ny PAF izay nahazo fanenjehana ihany koa nanao hoe : « tsy mpamono olona izahay! ».
Nataon’ny biraon’ny SMM sy ny mpiara-dia aminy tsinontsinona mihitsy ny Dokotera nandray ny fanapahan-kevitra namela ny fandefasana an’i Claudine hitsabo tena tatsy amin’ny Nosy Maorisy. Naha be resaka ny maro mihitsy ireny fanambarana nataon’ny biraon’ny SMM nitsabaka tamin’ny asan’ny Mpitsabo iny tahaka ny hoe manana fari-pahaizana lavitra mihoatra noho ny Dokotera eo amin’ny sehatry ny Fitsaboana.
Tsy tokony hanatona toeram-pitsaboana sy hopitaly intsony ve izany ny marary fa hivantana avy hatrany dia any amin’ny biraon’ny SMM? Ireny fihetsika nasehon’ny biraon’ny SMM ireny mantsy dia toa midika fa tonga lafatra tokoa izany tontolon’ny Fitsarana eto amintsika izany, toa te hanambara fa tsy misy ary tsy manan-toerana eo amin’ny fianakaviamben’ny Fitsarana mihitsy izany klolikoly izany ary farany, ny taranja Lalàna no fianarana tokony hataon’ny olona te hivoaka ho Dokotera.